Maxay tahay sababta loo soo qaban la'yahay hoggaamiyaha IS Abu Bakr al-Baghdadi? - BBC News Somali
Image caption Abu Bakr al-Baghdadi
Waa nin ay dunida oo dhan soo qabashadiisa ku howlan tahay. Abu Bakr al-Baghdadi, hoggaamiyaha ururka isku magacaabay Dowladda Islaamka ee IS oo iskii iisu magaacabay inuu yahay 'Khaliifa' waxaa madaxiisa la dul dhigay $25 milyan oo doolar (£19 milyan oo gini).
Muddo seddex sana ah ayaa soo qabashadiisa baadi goob looga jiraa, iyada oo halka uu jaan iyo cirib dhigay la la'aa ilaa uu maalmo ka hor uu ka soo muuqday Muuqaal isaga oo ku sugan magaalada Mosul ee dalka CIraaq oo ah magaalada uu 2014-tii kaga dhawaaqay inuu yahay Khliifada Islaamka oo uu hoggaaminayo dolwadda Islaamka.
Horraantii toddobaadkan al-Baghadaadi wuxuu soo bandhigay muuqaal 18 daqiiqo soconaya oo uu kula hadlayey taageerayaashiisa.
Haddaba halkuu joogaa, ma la raadiyey si loo soo qabto, Mareykanka iyo Xulafadiisa qalabka ugu casrisan adeegsada maxay u soo qaban la'yihiin?
IS oo laga qabsaday magaalada Dabiq
Wararku waxay sheegayaan 3-di bishii November 2016-kii Baghdadi inuu sameeyey khaladki noolashiisa ugu weynaa taasoo uu ku sigtay inuu naftiisa ku waayo.
Dagaal ka socday magaalada labaad oo Ciraaq uguweyn ee Mosul ayaa waxaa dagaal ballaadhan ku soo qaaday Mareykanka xulafada uu horkacayo oo dagaalka kula jirto ururka IS.
Dagaalka oo socda ayuu Baghdadi meel magaalada ka bxsan uu farriin 45 ilbiriqsi socotay oo dagaallamayaasha IS uu ku dhiirragelinayo dagaalka iney sii wadaan ugu tabiyey dhanka isgaarsiinta Fooneeyaha.
Farriinti Baghdaadi uu ku gudbinayey Fooneeyaha waxaa hawada ka qabtay diyradaha dagaalka xulafada ay leeyihiin oo duqeymo ku hayey magaalada Mosul, iyaga signal-ka codka Baghdadi raacayo waxay markiba duqeeyeen halka uu joogay balse nasiib darro waa uu ka badbaaday duqeyntaaasi.
Ciidmada ilaalada Baghdadi ayaana hoggaamiyahooda oo bad qaba kala baxay goobti uu ku sugnaa oo ay diyaaradaha xulafada ku tuhmayeen Baghdadi isla-markaana ay duqeeyeen xilligaasi oo lagu tilmaamo inuu ahaa xilli uu galay halista ugu badneyd ee soo wajahdo.
Image caption Weli ma cadda goobta rasmiga ah uu ku sugan yahay hoggaamiyaha IS
Laamaha sirdoonka Mareykanka muddo toban sana ah ayey ku raadjoogeen iney soo qabtaan ama ay dilaan, hoggaamiyihi ururka Al-qaacida Osama Bin Laden, kaddib markii uu dhacay weerarki 9-ka bisha September 2001-da lagu qaaday Mareykanka.
2-da bisha May 2011-kii waxaa Osama Bin Laden guri ku yaallo Pakistan oo uu ku sugnaa ku dilay ciidamada Kumaandoosta Badda Mareykanka oo weerar gaadma ah ku qaaday.
Afhayeenka IS oo lagu dilay Suuriya
Hoogamiyaha IS ee Afghanistan oo la dilay
Hay'adda sirdoonka qaranka Mareykanka ee NSA iyo Laanta sirdoonka Britain ee GCHQ ayaa aad ugu horreeya sirdoonka codadka dadka lagu raad joogo oo hawada laga qabto waxayna awood u leeyihiin qofka ay raadinayaan caalamka meel uu ka joogaba iney codkiisa hawada ka qabtaan sidaana ku dabagalaan.
Osama Bin Laden ayaa ahaa nin aad uga taxaddira in codkiisa hawada laga helo oo aan isticmalin dhammaan isgaarsiinta casriga ah, Baghdadina waxaad mooddaa inuu waddadi Bin Laden uu maray.
Image caption Abu Bakr al-Baghdadi waxaa muuqaalkiisa ugu dambeysay 2014-kii isaga oo ku sugan masaajid ku yaalla Mosul
'Howlgalladia amniga ee lagu guuleystay'
Ibrahim Awad al-Badri, wuxuu sanadki 1971-kii uu ku dhashay tuulo u dhaw magaalada Samarra ee dalka Ciraaq.
Dhalinyaranimadiisi wuxuu ahaa mid diinta kusoo barbaaray, wuxuuna marki dambe uu wakhtigiisa ugu badnaa uu ku soo qaatay saldhigga Bucca uu 2014-kii Mareykanka ku lahaa dalka Ciraaq.
Wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha sirdoonka dowladdi hore ee Ciraaq oo xeradaasi ku xirnayd.
"Waxaana la baray sida uu ula shaqeyn karo saraakiisha sirdoonka ee dalka ciraaq" ayuu yiri Michael Stephens oo ka tirsan Machadka RUSI uu fadhigiisu yahay magaalada London.
Afghanistan: Dad is qarxiyay oo baabi'iyay saldhig ciidan
Wuxuuna intaasi ku daray "howlaha sirdoonka ee loo diro inuu si wanaagsan uu u qabanayey." wuxuuna lahaa firfircooni aad sareeysa oo cidwalba uu kula saaxibi karo.
Halkuu hadda ku dhuumanayaa Awad al-BAdri ayaa Stephen la weydiiyey?
"Waxaa hubaal ah inuu ku dhuumaaleysanaya xadka u dhaxeeya Ciraaq iyo Suuriya", ayuu yiri Stephen.
Image caption Baghdadi wuxuu xiriir qarsoodi ah uu la lahaa siroon hore oo dowladda Ciraaq ka tirsan oo xabsi ku jiray
Hoggaamiyihi hore ee Ciraaq Saddaam Xuseen muddo sagaal bilood ah ayuu dalka ciraaq ku dhuumaaleysanayey, ilaa marki ugu dambeysay la helay xog ku saabsan inuu ku dhuumaaleysanayo magaalada uu ku dhashay ee Tikriit ama nawaaxigeeda.
Waxaana madaxiis la dul dhigay malaayiin doolar in la siinayo ciddi soo qabato ama soo sheegto Saddam Xuseen halka uu ku sugan yahay.
Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa Ciraaq waxay ugu dambeynti Saadaam ka soo qabteen god ku yaalla magaalada Tikriit oo uu ku dhashay, howlgalka lagu soo qabtay Saddaam ayaana xulafada Mareykanka uu hoggaaminayo u ahayd guushii ugu weyneyd oo ay gaaraan inta ay dalka Ciraaq dagaalka ka wadeen.
Mareykanka oo beeniyay in uu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay Iiraan
Haddaba, qofka ay soo qabashadiisa dunida oo dhan ku raad joogto uu adeegsaneyn dhammaan aaladaha isgaarsiinta ee soo qabashadiisa sahli lahaa, hal goobna uusan wakhti badan ku sugnaaneyn oo uu aagga badbaddasho wey ku adagtahay Mareykanka iyo Waddamada reer galbeedkaba ee xulafada la ah iney ninkaasi soo qabtaan.
Ugu dambeyn, soo qabashada al-Baghdadi waxay u baahan tahay Dulqaad aad u badan maadaamaa ay adag tahay soo qabashadiisa iney gacan ka geystaan dhammaan aaladaha casriga ah ee dhinaca Teknooloojiyadda, waddada keli ah ee u furan qabashada Baghdadina ay tahay qof aad ugu dhaw oo doorbido inuu lacagta faraha badan ee madaxiisa la dul dhigay qaato oo la helo.